Madaxweynaha Somaliland oo qaabilat Wafdi ka socda Dowladda Qatar - Awdinle Online
Madaxweynaha Somaliland oo qaabilat Wafdi ka socda Dowladda Qatar
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi waxa uu Maanta xafiiskiisa ku qaabiley wefdi ballaaran oo Maanta gaaray Magaalada Hargeysa, kaas oo socda dalka Qadar oo uu hoggaaminayo Ergayga gaarka ah ee Ra’iisul- Wasaare ku-xigeenka, ahna wasiirka arrimaha dibedda ee dalka Qadar, Dr. Mutlaq bin Majed Al-Qahtani.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in ugu horeyn Madaxweynaha Somaliland, ayaa warbixin dheer ka siiyey wefdiga xaaladda guud ee Somalialnd halkii laga soo ambo qaaday geeddiga Dimuquraaddiyadda muddo Soddon sanno ah, isla markaana uu ka gudoomay salaan ay uga sideen madaxda dalka Qadar.
Sidoo kale kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay sidii Dowladda Qatar iyo Somaliland ay xiriir wanaagsan oo walaalnimo iyo iskaashi wada shaqayneed ku dhisan ay u yeelan lahaayeen iyo in dowladda Qatar ay xafiis Diblumaasiyadeed oo rasmi ah ku yeelato Somalialnd.
Sidoo kale, waxa laga wada hadlay sidii hay’adda Qadar u qaabilsan mucaawimooyinka ee (Qadar Charity) ay xafiis uga furan lahayd Somaliland, loona xoojin lahaa xiriirka wada shaqayneed oo dhinaca mucaawimooyinka ah iyo samafalka ah.
Previous articleGolaha Shacabka oo laalay sharcigii muddo kordhinta
Next articleMareykanka & Midowga Yurub oo War kasoo saaray Go’ankii Farmaajo